samedi, 20 mars 2021 08:28
COVID-19 : Roa (02) no lavo
Antontan’isa voaray ny 19 Martsa 2021 : Tranga vaovao: 114 Analamanga: 70Atsinanana:01Diana: 11Alaotra Mangoro: 04Matsiatra Ambony: 01Boeny: 03Vakinankaratra: 04Menabe: 02Analanjirofo: 17Sofia: 01
samedi, 20 mars 2021 08:12
Mahajanga : Sambo kaomoriana iray nogiazana rehefa hita voan’ny Covid-19 ny tantsambo roa
Nogiazana tsy hiala ao amin’ny seranan-tsambon’i Mahajanga ny sambo “Ville de Fomboni” avy any Mohéli. Nitondra entana ity sambo ity, ary tonga tao Mahajanga ny atoandron’ny 15 martsa 2021. Miisa 15 ny tantsambo tao anatiny. Voamarina anefa fa voan’ny Covid-19 ny roa tamin’ireto farany. Arahi-maso tsy mahazo mihetsika ao an-tseranana mandritra ny 14 andro, noho io tranga io.
Lapan’ny Fitsarana Antananarivo : Mikatona mandritra ny telo andro
Hisy fanadiovana sy famendrahana ranom-panafody amin'ny toeram-piasana rehetra eny anivon'ny Fitsarana isan'ambaratongany avy eto Antananarivo renivohitra, ho fiarovana ny mpiasa sy ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny Fitsarana ary noho ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Mikatona avokoa ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany, ny Fitsarana momba ny ady atao amin'ny Fanjakana, ny Fitsarana ara-bola, ny Fitsarana Ambony, ny Fitsarana an-Tampony sy ireo Fitsarana mandrafitra azy ny zoma 19, sabotsy 20 ary ny alahady 21 martsa izao. Miverina amin’ny laoniny ny fisokafan'ny toeram-piasana ny alatsinainy 22 Martsa 2021.
vendredi, 19 mars 2021 18:38
Ministeran’ny fahasalamana : Noravana ny « Centre d’Aide Médicale d’Urgence de Madagascar »
Noraisina nandritra ny filankevitry ny Governemanta ny talata 16 martsa teo, ny didim-panjakana mandrava ny « Centre d’Aide Médicale d’Urgence de Madagascar » nafohezina tamin’ny hoe : CAMUM, rantsamangaika teo anivon’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.
Maorisy : Entanina hanao vakisiny ireo Malagasy monina sy miasa any
Nanao filazana ny Ambasadaoro malagasy miasa sy mipetraka atsy Maorisy anio alakamisy 18 martsa 2021, fa ho fanohanana ny ezaky ny Governemanta maorisiana amin'ny fanaovana vakisiny miaro amin'ny Covid-19 ny 60%n'ny mponina, mba ahazoana hery fiarovana iraisana, dia manentana ireo teratany malagasy hanatanteraka izany vakisiny izany ihany koa. Mampatsiahy anefa ny Ambasadaoro, Albert Camille Vital, fa tsy voatery ny fanaovana izany vakisiny izany atsy amin'ny Nosy Maorisy fa malalaka ny safidin'ny tsirairay.
jeudi, 18 mars 2021 19:31
Covid-19 : Niampy 01 ny maty
Antontan'isa ny 17 martsa 2021 : Isan'ny fitiliana: 863 TRANGA VAOVAO: 173 - Analamanga: 101 - Atsinanana: 17- Diana: 17 - Alaotra Mangoro: 02- Boeny: 05- Vakinankatra: 04- Sava: 20- Atsimo Andrefana: 05- Sofia: 02
jeudi, 18 mars 2021 17:06
Andry Rajoelina : Hitafa amin'ny Malagasy ny sabotsy 20 martsa 2021
Hitafa sy hidinika amin'ny Malagasy amin'ny alalan'ny RNM-TVM ny filoha Andry Rajoelina ny sabotsy 20 martsa 2021 amin'ny 08ora alina.
jeudi, 18 mars 2021 16:42
Covid-19 : Hiady amin'ny aretina isika sa tsia e
Nahazo alalana tamin'ny Katolika ampiasa ny Tany Soamandrakizay hanaovana tsinjaka bavata eo amin'ny tany masina ? Sa nomen'i Rajabaly alalana ampiasa ilay tany mena be nasiana lavaka be tsy azo nandehanana. Ny préfet moa zany mamela hamory vahoaka mihoatra ny 200 sa hoe an-kalaman-jana dia tsy maninona ? Iza ilay olobe ambony mikarakara ity fety goavam-be ity, fa raha zao artiste maro izao aloha dia zero maromaro no milahatra ao aoriana vao mihetsika izao. Samy ampitovy sary drone indray izany, ka samy mahay mitsangatsangana io, na tany mena midorehitra mamovoka tsy misy hazo na iray hialokalofana aza eny Soamandrakizay. Ny Barea Toamasina 5000 ny mpanatrika. Aza teriterena intsony izahay amin'ny ady amin'ny Covid-19 rehefa samy izany ihany, na isika hiady amin'ny aretina, na isika samy mi-demerda, ianareo malaky manao Evasan vao miakatra kely ny hafanana, ny Gasy taraiky terenareo hisotro tambavy eto. Bon covid daholo e. Tsy misoronaPatrick
jeudi, 18 mars 2021 16:41
Haino aman-jery : Nodimandry teo amin’ny faha-42 taonany i Dorin
Lavon’ny aretina i Rajaonarisoa Dorin Nirina. Mpanatontosa fandaharana tao amin'ny TV Plus Madagascar izy, toy ny « Don-dresaka », « Emission spéciale ». Herinandro izay dia nitantara amina rakin-tsary ny mahazo azy i Dorin na Dalon, izay anarana fiantson’ny namany sy ahafantan’ny maro azy. Tao no nilazany fa efa taizan’aretina sohika izy. Voan’ny Covid-19 nefa i Dorin, ary tamin’ny fanatanterahany ny asany no nahazoany ny aretina, na efa nanaja ireo fepetra sakana ara-pahasalamana aza, ka nanentanany ny rehetra samy hitandrina. Notsaboina teny amin’ny hopitaly manarapenitra izy noho io aretina io. 42 taona i Dorin izao nodimandry izao. Namela mananontena sy kamboty telo mianadahy : roa lahy 18 sy 16 taona ary vavy kely 6 taona. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 18 mars 2021 11:08
Covid-19 : Ireo toerana mandray ny fitiliana
¤ Ho an’Antananarivo dia eny amin’ny HJRA sy ny Village Voara ¤ Ireo hopitaly manarapenitra sy CHRD isaky ny renivohi-paritra.